Vao omaly ohatra dia lehilahy miisa roa no voasambotra tany an-toerana. Ny iray nisandoka ho zandary be galona niaraka tamin’ny fanamiana mifandraika amin’izany. Nomarihin’ireo mpitandro ny filaminana moa fa tsy hitsitsy izy ireo ho an’izay tratra, indrindra fa ireo minia manararaotra ny fahasahiranam-bahoaka amin’izao fihibohana tsy hivoahana ny trano izao. Mikasika ireo fiara afaka mivezivezy manokana dia fantatra fa ireo nahazo alalana manokana sy ireo mitatitra ireo kojakoja ilain’ny mponina amin’ny andavanandro ihany no afaka mandeha. Hentitra ihany koa ny fisavana ireo môtô noho izy ireny lasa fitaovam-pitaterana hampiasain’ny mpanao ratsy matetika ka tsy maintsy arahi-maso akaiky.